Tetibola 2020: hisondro-bidy ny katsaka, ny sigara, ny toaka, … | NewsMada
Tetibola 2020: hisondro-bidy ny katsaka, ny sigara, ny toaka, …
Ankoatra ny sigara sy ny zava-pisotro misy alikaola, saika misondro-bidy isan-taona, hisondrotra koa ny vidin’ny katsaka sy ny faika (soja, voanjo, …) fanamboarana sakafom-biby.
Tsy noraisin’ny solombavambahoaka ny fangatahana sy ny fanamarihan’ny mpiompy, ny mpamboly, ny mpandraharaha amin’ny fanodinam-bokatra. Nanaitra ny fanjakana ireto farany, ny herinandro lasa teo fa hisondro-bidy 25 hatramin’ny 40% ny vidin’ny sakafom-biby (provandy) rehefa mihatra ny hetra TVA 20% tataovana amin’ny katsaka sy ny faika, voasoratra ao anaty Tetibola 2020, nankatoavin’ny solombavambahoaka, ny sabotsy teo.
Nanamarika ny minisiteran’ny Tetibola sy ny vola, fa efa nisy fotoana nanafoanana io hetra TVA io tamin’ny katsaka, saingy tsy nampihena ny vidiny teny an-tsena akory, izany hoe, tsy niantraika ho an’ny mpanjifa.
Manampy izany, hisondrotra koa ny vidin’ny sigara sy ny zava-pisotro misy alikaola (toaka sy labiera), toy ny isan-taona satria hiakatra ny hetra manokana (droit d’accises) efa fanao isan-taona. Tsy noraisina koa ny fangatahan’ny mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra, ny hanafoanana ny hetra manokana droit d’accises, izay fanao amin’ny vokatra rendrarendra, nefa ny fifandraisan-davitra efa tafiditra ao anatin’ny vokatra ilaina andavanandro.
Saro-toerana ny mpanao savony
Tsy nankatoavin’ny solombavambahoaka koa ny fangatahan’ny fanjakana ny hitataovana 20% ny bolabolan-tsavony (bondillons) hafarana avy any ivelany, fa natao 10%. Marihina fa maromaro ny orinasa eto an-toerana manafatra io akora io, izay efa savony mihitsy fa mampiditra azy anaty lasitra fotsiny, hakana ny endriny tiana hatao.
Nihevitra ny fanjakana sy ny minisiteran’ny Vola, fa anton’io soso-kevitra 20% io ny hiarovana ny orinasa mpamokatra savony eto an-toerana, tsy manafatra io akora io, fa tena mamokatra manaraka ny dingana hatrany am-boalohany rehetra amin’ny fanamboarana savony. Tsy voahaja araka izany ny tena fifaninanana.